धेरैले मलाई डग भन्छन, आज यो ड्याड | Martech Zone
सोमवार, जुन 18, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सबै ईमानदारी मा, म यो पोस्ट को समय को योजना बनाएको छैन। यो यस्तै संयोग हो, यद्यपि मैले यो तपाईंहरू सबैसँग बाँड्न पर्छ।
फ्रेड उमेर र उद्यमी प्रतिभामा यसको प्रभावको बारेमा सोध्दा हालै टिज्जामा मान्छेको पूरै समूह भयो। ब्याकल्याण्डमा समावेश गरिएको थियो डेभ विनर, स्कट कर्प, स्टीभन हडसन, र अरूहरूको मेजमान जो टिप्पणी.
मसँग शीर्षकको बारेमा धेरै कुरा छैन त्यसैले मैले हल्का टिप्पणी गरे। म एक विविध कार्यस्थलको सराहना गर्छु जहाँ दुबै युवा र अनुभव अवस्थित छन्। युवा व्यक्तिले सीमानाहरूमा कम ध्यान दिन चाहान्छन् त्यसैले तिनीहरूको ताजा हेराई र डरको अभावले आफूलाई जोखिम लिन र केही उत्कृष्ट समाधानहरूको साथ आउन राम्रोसँग उधारो दिन्छ। विडम्बनाको कुरा, म आफूलाई युवाको रूपमा सोच्न चाहन्छु and and र म प्रायः स्पोकन हुँदछ र आदर्शका लागि केही उत्तम विकल्पहरू खोज्दैछु। अर्कोतर्फ अनुभवले परिणामको साथ जोखिमलाई सन्तुलनमा राख्छ - अक्सर प्रकोपलाई विफल पार्दै।
एक उत्पाद प्रबन्धक को रूप मा, म प्रस्तुत जोखिम मेरो कम्पनी संग मात्र हैन। जोखिम मैले माने कि ,6,000,००० ग्राहकहरु लाई सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने र उनीहरुको कम्पनीहरु लाई पार गरीएको छ। त्यो एक सुन्दर मोटो पियानो छतबाट झुण्डिएको छ, त्यसैले म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि डोरीहरू सुरक्षित छन् र समुद्री गाँठो सबै बाँधिएको छ हामीले यसलाई स्थानमा सार्ने निर्णय गर्नु अघि।
ठीक छ, बुबा!
आजको दिन फरक थियो। जब मैले आज संसाधनहरू र प्रोजेक्टमा केहि सीमाहरू सेट गरेको थिएँ, मसँग कसैले व्यar्ग्य गर्दै भनिएको थियो, "ठीक छ, बुबा!"। यद्यपि यो अपमान गर्न खोजिएको थियो, तर वास्तवमा मैले यसलाई एकदम शान्तपूर्वक बन्द गरें। यदि त्यहाँ एक चीज छ जुन म मेरो जीवनमा सबैभन्दा अधिक गर्व गर्दछु, यो एक महान बुबा हुनुहुन्छ।
मसँग दुई बच्चाहरू छन् जो खुशी छन्, समस्यामा नपर्नुहोस् .. सँग एक छात्रवृत्ति संग कलेज मा स्वीकार्य र अरूले भर्खर उनको स्कूलमा "घन्डी पुरस्कार" जितेको हो। दुबै संगीतमय प्रतिभाशाली छन् - एक गायन, रचना, र मिक्स संगीत ... अर्को एक उत्कृष्ट अभिनेत्री र गायक।
त्यसोभए, काममा मेरो कनिस साथीले सायद “बुबा” भन्दा केहि फरकको साथ ल्याउनुपर्दछ। मलाई "बुबा" भन्ने शब्द मन पर्छ। यदि म "बुबा" जस्तो लाग्दछु भने, सायद मैले बच्चालाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने अवस्थालाई सम्हाल्दैछु। विडम्बनाका साथ पर्याप्त, म कतै मेरा आफ्नै बच्चाहरू संग यी अवस्थाहरू छ।
उमेर र काम
के यसले उमेर, ब्यापार र उद्यमशीलतामा मेरो राय बदल्छ? पक्कै छैन। म अझै पनि विश्वास गर्दछु कि हामी के गर्न सक्दछौं त्यसको सीमानामा धकेल्न हामीलाई युवावस्थाको निडरता चाहिन्छ। I do विश्वास गर्नुहोस् कि धेरै पेशेवरहरू उमेरसँग अलि बढी सहिष्णु हुन्छन् र सेट गरिएका सीमाभित्र तटहरू झुकाउँछन्। म असन्तुष्टिको कदर गर्छु, यद्यपि म अझै सम्मान, जिम्मेवारी र सीमाहरूमा विश्वास गर्छु।
मैले मेरा बच्चाहरूलाई सिकाउने पाठहरू यो हो कि उनीहरू पहिलेकै ठाउँमा थिएँ, म गल्तीहरू गर्दैछु, र मैले आफूले सिकेको बुद्धिको बारेमा जान उत्सुक छु। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरूले मेरो खुट्टा अनुसरण गर्नुपर्छ, यद्यपि। मलाई यो तथ्य मनपर्छ कि मेरी छोरी मञ्चमा छिन जब मलाई विश्वास प्राप्त गर्न बर्षौं लाग्यो। मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि मेरो छोरा कलेजको लागि प्रस्थान गर्दै थियो जब म नेभीमा सम्मिलित हुनको लागि उद्देश्यविहीनको लागि अगाडि बढें। तिनीहरूले मलाई दिनहुँ आश्चर्यचकित गर्छन्! यसको एक अंश हो किन कि तिनीहरूले सीमालाई पहिचान गर्छन्, उनीहरूले मेरो सम्मान गर्छन्, र तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरूसँग आफूले चाहेको कुरा गर्ने स्वतन्त्रता छ (जबसम्म यसले उनीहरू वा अरू कसैलाई चोट नपु .्याउँदछ)।
म आशा गर्दछु कि मेरो "बच्चा" काममा एकै कुरा जान्न सक्दछन्! मलाई कुनै श doubt्का छैन कि उसले कम्पनीलाई चकित पार्न र ठूलो प्रभाव पार्नेछ, तर पहिलो कुरा पहिले… पहिचान गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको अनुभवलाई सम्मान गर्नुहोस् र सीमाहरू बुझ्नुहुनेछ। तपाईले त्यो गरिसकेपछि, सबैलाई छक्क पार्नुहोस् नयाँ ट्रेललाई दिशामा बसाएर कसैलाई सोचेको छैन। म तपाईंलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्दछु! सबै भन्दा पछि, के एक "पिता" को लागि हो?
PS: अर्को वर्ष, म फादर्स डे कार्ड चाहन्छु ... र शायद टाई।
तपाइँ पञ्चको साथ कसरी रोल हुने भनेर जान्नुहुन्छ भन्ने मान्छे जस्तै हुनुहुन्छ। एक विभाग को प्रमुख को रूप मा, म मेरो अन्तर्गत काम गर्ने मानिसहरु तपाइँको गुणहरु को कदर कि पायो। खैर, तपाइँका बच्चाहरूको उपलब्धीमा बधाई छ।